Edgybees waxay ku horumarin doontaa xirfadahaaga tijaabada ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyadoo la adeegsanayo 'ciyaar' fudud | Qalabka bilaashka ah
Edgybees waxay ku horumarin doontaa xirfadahaaga tijaabada ah diyaaradaha aan duuliyaha laheyn 'ciyaar' fudud
Edgybees waa shirkadda ka dambeysa softiweerka dhabta ah ee la kordhiyay ee loogu talagalay kaas oo loogu talagalay in qof kasta oo adeegsada uu soo helo adduun cusub oo uu kula baashaalo diyaaradooda halka, dabcan, uu si weyn kor ugu qaadayo xirfadahooda duuliye nuucaan ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Munaasabaddan, sida ay shirkaddu ku dhawaaqday, waxay ku guuleysteen inay horumariyaan nooc ka mid ah ciyaarta halkaas oo fikraddu tahay in, keligaa la ciyaarista iyo kuwa kaleba, aad ku raaxeysan karto sameynta tartamo halkaas oo ay tahay inaad ka leexato caqabadaha, labadaba dhabta ah iyo kuwa farsamada ah, intaad isku dayeyso in la ururiyo dhammaan noocyada abaalmarinta. Faahfaahin ahaan, wuxuu kuu sheegayaa inaad isticmaale ahaan ku raaxeysan karto in ka badan 30 koorso oo carqalad ah.
Hagaaji xirfadahaaga sida kormeeraha diyaaradaha aan duuliyaha laheyn mahadnaqa barnaamijka ay naga siinayaan Edgybees.
In yar oo faahfaahsan aan u sii socdo, sida muuqata iyo horumarinta arjigan cusub, ayaa Qalabka horumarinta DJI, markaa kuwani waa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee aad ku ciyaari kartid ciyaartan madaddaalada ah ee gaarka ah ee aad ugu raaxeysan karto goob kasta ama goob kasta, wax ka dhigaya, haddii ay suurtagal tahay, xitaa xiiso badan.
Nasiib darro iyo inkastoo xaqiiqda ah in codsigu yahay bilaash ah oo loogu talagalay labada qalab ee iOS iyo Android, Runtu waxay tahay inaan ka ognahay wax yar ama in ka badan oo ku saabsan tan iyo, fiidiyowga ay abuurtay shirkadda lafteeda, maahan inay muujineyso wax badan. Faahfaahinta kama dambaysta ah, ka hor intaadan sagootin, waxaan kuu sheegayaa inaad ka faa'iideysan karto, hadda, haddii ay dhacdo inaad haysato DJI Mavic Pro, DJI Phantom 4 Pro, DJI Phantom 4 Advanced, DJI Phantom 4 iyo DJI Phantom 3 Pro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Drones » Edgybees waxay ku horumarin doontaa xirfadahaaga tijaabada ah diyaaradaha aan duuliyaha laheyn 'ciyaar' fudud
In ka badan 250.000 nuqul oo Raspberry Pi Zero W ah ayaa la iibiyaa toddobaad gudihiis